Iiraan Oo Qiratay Diyaaradii Hawadeeda Ku Burburtay Iyo Dawladaha Ukraine Iyo Canada Oo Cadaalad Ka Dalbaday Dawlada Iiran[Faah Faahin] | 18 May News
Iiraan Oo Qiratay Diyaaradii Hawadeeda Ku Burburtay Iyo Dawladaha Ukraine Iyo Canada Oo Cadaalad Ka Dalbaday Dawlada Iiran[Faah Faahin]
Qirashada Iiraan ee ah inay “si aan ula kac ahayn oo kama` ah ” ay u soo rideen diyaarad rakaab oo laga lahaa Ukraine ayaa dhalisay in la dalbado inay caddaalad helaan 176-kii qof ee saarnaa diyaaradda, kuwaasoo dhammaantoodba geeriyooday.
Madaxweynaha Ukraine iyo raysal wasaaraha Canada, oo dalalkooda ay ka dhinteen 57 qof ayaa ka codsaday Iiraan inay caddaalad helaan dadkaas geeriyooday.
Dhanka kale dibadbaxyo ka dhacay Iran, ayaa waxay dadka qaar ugu baaqayeen Hoggaamiyaha Sare ee dalkaas Ali Khamenei inuu is casilo.
Baaaritaan la sameeyay ayaa muujinaya “in Gantaalkan si qaldan diyaaradda loogu riday”, waxaa sidaasi sheegay madaxwayne Xasan Ruuxaani.
Waxa uu intaa ku daray in arrintan ay ahayd “qalad aan la hilmaami doonin”.
Militariga Iiraan ayaa waxay sheegeen in diyaaradan ay ku soo dhawaatay goob xasaasi ah oo ay leeyihiin ilaalada Kacaanka Iiraan islamarkana loo maleeyay in ay tahay diyaarad cadow.
Iiraan ayaa horey u diiday wararka sheegayay in ay masuul ka ahayd burburka diyaaradda..
Ra’iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ingiriiska ayaa sheegay jimcihii in loo baahan yahay in baaritaan qotodheer lagu sameeyo waxa sababay shilka diyaaradda oo ay ku dhinteen 176 qof ee saarnaa.
Trudeau ayaa sheegay in ay hayaan maclumaad dhanka sirdoonka ah oo ku aadan arrintaas.
“Caddeymo aan ka helnay sirdoonka xulafadeena iyo kuweenaba waxay muujinayaan in diyaaradda dhacday uu soo riday gantaal ay gantay Iran, waxayna arrinta ahayd mid si ula kac ah loo sameeyay”, ayuu ra’iisul wasaaraha Canada.
Balse Iiraan ayaa xilligaasi diiday in ay diyaaradda soo dhacday ka dib markii ay gantaal ku tideen/.
Diyaaraddan oo ay leedahay shirkadda duulimaadyada ee dalka Ukraine ayaa dhacday saacado un kadib markii Iran ay weerartay saldhigyada Mareykanka ee gudaha dalka Ciraaq.
Sidoo kale warbaahinta Mareyknka ayaa tabisay in dowladda Iiraan ay si kama’ ah u soo ridday diyaaraddii rakaabka ahayd ee laga lahaa Ukraine.